စကစရဲ့ စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် အနာဂတ် ကြယ်တစ်ပွင့် (လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ) ကြွေလွင့်ခဲ့ ပြန်ပြီ.... - Sainpwar
HomeUncategorizedစကစရဲ့ စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် အနာဂတ် ကြယ်တစ်ပွင့် (လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ) ကြွေလွင့်ခဲ့ ပြန်ပြီ….
စကစရဲ့ စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် အနာဂတ် ကြယ်တစ်ပွင့် (လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ) ကြွေလွင့်ခဲ့ ပြန်ပြီ….
စစ်ကောင်စီ၏ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသူ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် သေဆုံး
အဲကမ္ဘောဇ (Air KBZ) လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စီး၏ Pitot tube အတွင်း သစ်ရွက်များ ထည့်သွင်းခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်၍ စစ်ကောင်စီ၏ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော လေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ ကိုမင်းမင်းစိုးသည် စစ်ကြောရေးတွင် ရသည့် ဒဏ်ရာများကြောင့် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်က သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က စစ်ကြောရေးကနေ အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိသားစုကိုတော့ မနေ့က အကြောင်းကြားတယ်။ ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ သူရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို ပို့ဆောင်မှာပါ ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကိုမင်းမင်းစိုး သေဆုံးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကို ၎င်း၏ မိသားစုထံ မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ နာရေး ပြီးမှသာ ဖြေဆိုနိုင်မည်ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားထားသည်…
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အောက်တိုဘာ ၁၇ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသူ တစ်ဦးရှိကြောင်း အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်သူအချို့ကလည်း ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီးမှုနှင့် စစ်ကြောရေးက နှိပ်စက်ဒဏ်ကြောင့် ကိုမင်းမင်းစိုး သေဆုံးသွားမှုကို ဝမ်းနည်းကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“Air-KBZ လေယာဉ်ရဲ့ Pitot tube အတွင်း သစ်ရွက်တွေ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမှုအတွက် Air-KBZ က လေကြောင်း တက္ကသိုလ်‌ကျောင်းဆင်း လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးခန့်ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
သက်သေအခိုင်အလုံ မချပြနိုင်ဘဲ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေတဲ့ ဒီအမှုကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက အမှုမတရား ဆင်နိုင်ဖို့ စစ်ကြောရေးမှာ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးနှိပ်စက် ဝန်ခံခိုင်းမှုတွေ ရှိနေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
စစ်ကြောရေးမှာ မတရား နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ဒဏ်နဲ့ အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာလ‌ည်း လုံလောက်တဲ့ ဆေးကုသခွင့်တွေ မရခဲ့လို့ ကိုမင်းမင်းစိုး သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်” လို့ လေကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်က ရန်ကုန် – ဟဲဟိုး ခရီးစဉ်ပျံသန်းမည့် လေယာဉ် ATR-72-600 အား မပျံသန်းခင် စစ်ဆေးရာ လေယာဉ်၏ Pitot tube အတွင်း သစ်ရွက်များ တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်၍ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် ကိုမင်းမင်းစိုး အပါအဝင် လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်းအချို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ (သို့) အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သို့) ပဝါရဏာနေ့” အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ